HeersareMuxumed: Warbixin: Dawladda Hoose Ee Hargeysa Oo 100% Cashuuraha Kordhisay Iyo Cabashada Dadweynaha
Warbixin: Dawladda Hoose Ee Hargeysa Oo 100% Cashuuraha Kordhisay Iyo Cabashada Dadweynaha
Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa cabasho xooggan ka muujiyey cashuuro ay dawladda Hoose boqolbolkiiba korhisay(100%), isla markaana waxay sheegeen in cashuurtaasi tacaddi ku tahay.
Cashuurtan oo ay dawladda hoose kordhisay horraantii sannadkan ee ay dadweynuhu ka cabanayaan ayaa waxa ka mid ah cashuurta maalinlaha ah, ta liisannada ganacsiga iyo cashuurta sanadlaha ah ee guryaha.
Cashuuran xaddigii (rates) la qaadi jiray la laban-laabay ayaa u muuqada kuwo ay dadweynu ku cabbireen inay dhibaato weyn ku tahay, taas oo khilaaf xooggan ka dhex abuurtay ganacsatada iyo dadweynaha oo isku dhinac ah, iyo dawladda hoose oo dhinac kale ka tagan arrinka. Tusaale ahaan liisannada ganacsiga oo hore u haan jiray 900,000slsh hadda waxa laga dhigay 1,800,0000slsh oo u dhiganta $268 dollar.
Mahad Axmed Aadan wuxuu ka mid yahay ganacsata magaalada Hargeysa, wuxuu noo sheegay in cashuurtan lagu kordhiyey ay culays ku tahay isla markaana aanay iska bixin karin, isagoo arrintan ka hadlayana wuxuu yidhi: “Haddii ay dawladda hoose leedahay dhaqaale yaraan iyo tamar darro ayaa cashuurta loo kordhiyey, dee wixii macquul ah ee annaga iyo danyartuba aanu qaadi karno inay kordhiso ayay ahayd laakiin boqolkiiba bolqol inay hal mar kordhisaa wax macquula maaha. Haddii aan tusaale soo qaato ta ugu yaran ee la kordhiyey waa juwanka xashiishka oo hore na looga qaadi jiray 1000 ssh. Haddii ay kunkaa ku kordhin lahaayeen labada boqol, saddex boqol amma shan boqol wax bay ahaan lahayd laakiin waxay kordhisay 100% oo macnaheedu yahay in laga dhigay 2000 oo shilling. Taasina maaha wax uu qofku qaadi karo.”
Xogaha kale ee aanu helnay ee xaqiijinaya cashuuraha ay dawladda hoose boqolkiiba boqol kordhisay waxa ka mid ah gurha oo tusaale ahaan haddii uu gurigu yahay 12*9m=108m*1,200slsh=129,600slsh, halka uu hore uga ahaan jiray 108m*600slsh=64,800slsh.
Waxaana cashuurtan la kordhiyey saamayn ku yeelatay dadka guryaha ku leh Hargeysa, sida ay tilmaamayso Raxma Axmed: “Anigu waxa aan ku jiraa guri 12*12 miter ah oo hore waxa la iiga qaadi jiray lixdan kun, hadda se boqol iyo labaatan kun ayaa la shubayaa. Aad iyo aad ayay u adag tahay laakiin dadka badankiisu waanu ogayn. Haddii ay cashuurtaasi hirgashana dadka kiroolaha ah iyagana kirada waa lagu kordhinayaa. Cashuurtaa lanagu kordhiyey anigu waan ka doodayaa oo waan ka hadlayaa miyaanan qof Somalilander ah ahayn.”
Xildhibaan Cabbaas Cabdi Aadan oo ka mid ah xildhaanbada golaha deegaanka Hargeysa oo aanau waydiinmnay sababta keentay inay cashuurta labanlaab ku kordhiyaan dadka ayaa sheegay inay baahi keentay, isagoo cashuurta la kodhiyey ka hadlayanba wuxuu yidhi: “Sababta cashuurta loo kordhiyey waxay tahay baahi badan ayaa jirta oo waddooyin ma jiraan, oo waxyaabo badan ayaan jirin. Markii waddooyinka iyo waxyaabihii magaalada lagu horu marin lahaa ayaa la isu eegay markaas ayay noqotay in cashuurta la kordhiyo. Hadda cashuurteenuna ma badna marka loo eego Jabuuti iyo Itoobiya. Waxaana saska keenay dadku cashuur jaban ayay u barteen, midda kale dadku waanay is aaminsanayn oo waxan la qaadanayo in wax lagu qabanayo ma aaminsana.”
Xildhibaanka oo ka garaabay markii aanu hordhignay cashada dadka ka soo yeedhaysa, ayaa xusay inay marka loo baahdo lagu noqon doono wax-ka-bedelka cashuurta ka dib marka ay dhaqan gasho: “Waxyaabo badan ayaa la eegayaa oo culayska ka yimaadaa ayaa la eegayaa, dee kollay meesha culays ka yimaado ee doodo iyo asqabsi ka yimaadaan dib ayaan loo eegayaa illayn meesha keligii taliye ma jira'e.” Ayuu hadalkiisa ku soo af-meeray xildhibaan Cabbaas.
Waxaana masuuliyiinta suuqa Waaheen ee Hargeysa ay noo sheegeen inay guddi u saareen cashuurta la kordhiyey ay dawladda hoose kala hadlayaan sidii meel dhexe la isugu iman, iyagoo tilmaamay ka wadan hadlayaan sidii meel dhexe la isugu iman lahaa.
Posted by HeersareMuxumed at 1:55 AM